MaBrand Anoshuvira Kubatanidzwa Anofanira Kuita Izvi Zvinhu Zvitatu | Martech Zone
Nyika payaive yakavharika muna 2020, zviitiko zvedhijitari zvakapfuma nemifananidzo nemavhidhiyo zvakaita kuti tirambe takabatana. Taivimba zvakanyanya kupfuura nakare kose kune dzimwe nzira dzechinyakare dzekutaurirana kwedhijitari uye takatora nzira nyowani uye itsva dzekugovera hupenyu hwedu uye kubatana kubva kure. Kubva kuZoom kuenda kuTikTok uye Snapchat, isu taivimba nemhando dzedhijitari dzekubatanidza chikoro, basa, varaidzo, kutenga, uye kungoramba tichionana nevadikani. Pakupedzisira, simba rezvinyorwa zvinoonekwa raiva nechirevo chitsva.
Hazvina mhosva kuti nyika yepashure-denda inoshanduka sei, vatengi vacharamba vachishuva zvinoonekwa pane ese maficha ehupenyu.
Dambudziko reCOVID-19 rakawedzera kudhijita kwekudyidzana kwevatengi nemakore akati wandei.
Kusangana nezvinhu zvitsva izvi nenzira inotungamira kune mhedzisiro yebhizinesi, mabhureki anofanirwa kutarisa pazvinhu zvitatu zvemukati zvinoonekwa kuvaka hukama huri nani nevateereri vavo.
Penesai Chiedza pane Microbrowsers uye Diki Screen Engagement
Wanga uchiziva here kuti mameseji mameseji akunda masocial media mapuratifomu mu nhamba yevashandisi vanoshanda pamwedzi ne20%? Nevashandisi vakawanda pamapurogiramu ekutumira mameseji, mabhureki ave nemukana wekusvika kuvatengi kuburikidza nemamicrobrowsers, kana iwo madiki madiki ekutarisa mafoni anopihwa neiyo URL iri kugoverwa mune iwo mameseji mameseji.
Kuti usvike kune vatengi munguva idzodzo dzenharembozha, zvakakosha kuti mabhureki aone kuti ndeapi mamicrobrowsers anozivikanwa pakati pevatengi uye muindasitiri yakapihwa. In Cloudinary's 2021 State of Visual Media report, takaona kuti iyo yepamusoro meseji yepuratifomu mhando inofarirwa iMessage - inobata nhamba-imwe chinzvimbo pasi rose uye muzvikamu.
WhatsApp, Facebook Messenger, uye Slack ndezvimwe zvemamwe mapuratifomu anozivikanwa anotsanangurwa se rima social machanera, ayo anotsanangura anoita seasingaonekwe mabhureki asingaone kana vezera vachigovana zvinongedzo kana zvirimo. Iyi diki-screen yekubatanidzwa mikana inogona kuita yakakura kukanganisa pahuwandu hwekudzvanya uye kuenderera mberi kubatanidzwa, chimwe chinhu mabhureki nhasi hachikwanise kupotsa.
MaBrand anogona kugadzirira mifananidzo yavo uye mavhidhiyo e microbrowsers nekugadzirisa izvo zvakasarudzika zvinodiwa zveyakanyanya rima-social chiteshi. Imwe neimwe microbrowser inoburitsa chinongedzo chekutarisa zvakasiyana, saka mabhureki anofanirwa kukwirisa uye kugadzirisa aya mapikicha nemavhidhiyo zvinoenderana kukwezva mabhatani ekudzvanya. Nezviono zvakagadziridzwa, mabhureki anogona kuita yakanaka yekutanga fungidziro kana zvinongedzo zvakagovaniswa pakati pemhuri, shamwari, uye vatinoshanda navo.
Govera Nyaya Dzinomanikidza NeVhidhiyo, Vhidhiyo uye Zvimwe Vhidhiyo
Vhidhiyo traffic yakakura zvakanyanya panguva yedenda, ichipa gedhi kune nyika kunze kwezvakavharika-pasi chokwadi.
Kubva muna Ndira 2019 uye kuburikidza nedenda, zvikumbiro zvevhidhiyo zvakapetwa kaviri kubva pa6.8% kusvika 12.79%. Vhidhiyo bandwidth yakakura neinopfuura 140% muQ2 2020 chete.
Nekuenderera mberi kwekukwira kwevhidhiyo, hazvishamise kuti mabhureki ari kutonga nekushandura akawanda evhidhiyo zvirimo kupfuura nakare kose kuti asvike kune vatengi. Iyi nzira ine simba yekutaura nyaya inogona kushandiswa nenzira dzakati wandei, kusanganisira:
Mavhidhiyo anotengeka -Kune e-Commerce brand, mavhidhiyo anotengeka anogona kuunza zvigadzirwa kuhupenyu, uyezve batanidza vatengi kune akakodzera chigadzirwa mapeji kwavanogona kutenga-panguva-yekutenga.
3D mavhidhiyo -Ma brand anogona kugadzira 360-degree mifananidzo kana vhidhiyo kubva ku3D modhi kugadzira yazvino uye inoteerera yekutenga ruzivo pane yega yega chigadzirwa peji.
Mushandisi interface mavhidhiyo -Vhidhiyo inogona zvakare kuendeswa nenzira dzisingatarisirwe uye dzekugadzira, senge papuratifomu yevatengi inoratidza zvinhu zvakaita semazano ekubika kana matipi ekushongedza, kubatsira kugadzira isina musono brand chiitiko.
Kubatanidza aya mavhidhiyo, zvikwata zvekushambadzira uye vanogadzira vanovatsigira shandura vhidhiyo midziyo ka17 paavhareji. Iyi inzira yakaoma uye inopedza nguva inoda kuti vanogadzira vatore vhidhiyo macodecs pamwero. Kuti uchengetedze mazana emaawa enguva yekusimudzira uye kugovera iyo nguva kune imwe nhanho yekuedza, mabhureki anogona kuvimba neAI kuita kuti maitiro acho akurumidze uye asina musono.
Wedzera Kuteerera Kwefoni
Kupindura kwenharembozha kunofanirwa, kunyanya kana nharembozha dzinenge dzinenge hafu yewebhu traffic pasi rose. Kune mabhureki, izvi zvinoreva kuve nechokwadi chekuti mifananidzo nemavhidhiyo zvinoteerera uye zvakagadziridzwa kune nharembozha. Avo vasiri kushandisa dhizaini inopindura kune yavo yekuona zvinhu vari kurasikirwa nemukana wekusimudzira SEO masosi. Google's Core Web Vitals zvese zvine chekuita neruzivo rwemushandisi, uye kukoshesa kupindurwa kwenhare kunovimbisa kuti webhusaiti yemhando inowanikwa zviri nyore mumaseji ekutsvaga.
Zvekare, iri harisi basa riri nyore kana uchiendesa mifananidzo nemavhidhiyo kumapuratifomu akasiyana zuva rega rega. Wedzera izvo nemahwindo ekuona akasiyana, maratidziro, uye zvishandiso, uye rinogona kuve basa rinorema zvakanyanya. Kuve nechokwadi chekuti zvese zvakagadziridzwa kune nhare-yekutanga nyika, mabhureki anogona kushandisa otomatiki anopindura dhizaini kuunza yakafanana, yemhando yepamusoro ruzivo rwemushandisi, zvisinei nechiratidziro kana mudziyo. Ne otomatiki, mabhureki anogona kutyaira hunyanzvi mukufambiswa kwebasa uye nekuvandudza zvakanyanya chinzvimbo uye ruzivo pane mobile.
Vaka Zvirinani Kubatana Nesimba reKuona-Yekutanga Engagement
Kubva padenda, takadzidza kuti munguva dzisina chokwadi, mabhureki anofanirwa kunzwisisa nzira yekubatana nekuita nevateereri vavanovavarira. Microbrowsers, mavhidhiyo, uye nharembozha mawebhusaiti acharamba achigadzira maonerwo anoitwa nevatengi uye nekudyidzana nemhando dzavanofarira. Automation uye AI ichave yakakosha kuendesa izvi zviitiko pamwero.
Nezviono zviri pakati penyika itsva ino yekudyidzana kwedhijitari, mabhureki anogona kuita aya akanakisa maitiro muhurongwa hwavo hwese uye kusimudza bara pane zvinoonekwa-kutanga zviitiko.
Tags: 20213d mavhidhiyoaikushandisa michinacloudinarygoogle core web vitalsmameseji maapplicationmicrobrowsersnhare yekuitamobile videonharembozha mawebhusaitiwirirana patanimavhidhiyo anotengwausimbemamiriro ekuona mediamamiriro ekuona media reportmushandisi interface mavhidhiyovideo assetsvhidhiyo codecskutendeuka kwevhidhiyokuona kubatanidzwazvinoonekwa mediawhatsapp